Liver Fluke Infection (အသည်းတွင် ကပ်ပါးပိုးဝင်သော ရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Liver Fluke Infection (အသည်းတွင် ကပ်ပါးပိုးဝင်သော ရောဂါ)
Liver Fluke Infection (အသည်းတွင် ကပ်ပါးပိုးဝင်သော ရောဂါ) ကဘာလဲ။
အသည်းတွင် ကပ်ပါးပိုးဝင်သောရောဂါသည် သည်းခြေပြွန်များတွင်ဖြစ်သော နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် ကပ်ပါးပိုးကောင်များတွယ်ညိနေသော အစာများ၊ ရေများကို စားသောက်မိခြင်းနှင့် မကျက်သေးသော ငါးများကို စားမိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
Liver Fluke Infection (အသည်းတွင် ကပ်ပါးပိုးဝင်သော ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အသည်းတွင် ကပ်ပါးပိုးဝင်သောရောဂါသည် အလွန်အဖြစ်များပြီး ယောကျာ်း မိန်းမ၊ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်
Liver Fluke Infection (အသည်းတွင် ကပ်ပါးပိုးဝင်သော ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဗိုက်၏ ညာဘက်အပေါ်ပိုင်းတွင် အောင့်ခြင်း
အသည်းကြီးခြင်း (အသည်းသည် နာကျင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သလို မနာကျင်ဘဲ အသည်းကြီးခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။)
၂၀% သောရောဂါဖြစ်သူများတွင် အင်ပြင်ထခြင်းကို တွေ့ရတတ်သည်။
ကလေးများတွင် မူးဝေခြင်း၊ ချွေးပြန်ခြင်းများကို အတွေ့ရများပါသည်။
အရေပြားတွင် အဖုများဖြစ်ခြင်း၊ သန်ကောင်များသည် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းတွင် ပိတ်ခြင်းကြောင့် တရွှီရွှီ မြည်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ရောဂါပိုးရှိသော တိရိစ္ဆာန်များ၏ အသည်းကိုမချက်ပြုတ်ဘဲ စားမိခြင်းကြောင့် ပြင်းထန်သော လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အသံအိုးရောင်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သည်းခြေပြွန်ရောင်သောသူများတွင် အဖျားမကျခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်းနှင့် အသည်းရောင်အသားဝါဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်များတွင် ရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးအနေနှင့် မုန့်ချိုအိတ်ရောင်ခြင်းဖြစ်ကာ ပြင်းထန်စွာဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း စသည့် လက္ခဏာများ ခံစားရနိုင်ပါသည်။
Liver Fluke Infection (အသည်းတွင် ကပ်ပါးပိုးဝင်သော ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အသည်းတွင် တွယ်သော ကပ်ပါးသန်ပြားကောင်သည် သိုးများနှင့် ဆိတ်များကို ကူးစက်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ သို့သော် လူတို့ဆီကူးစက်ခြင်းသည် ထိုအကောင်များ၏ အသားကို အစိမ်းစားသောကြောင့် ကူးစက်ခြင်းမျိုး တခါတရံတွင်သာဖြစ်ပြီး ရေချိုတွင် စိုက်အပျိုးသော အပင်များကို စားမိခြင်းကြောင့် အဓိက ရောဂါကူးစက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူများသည် အစားများကို အစိမ်းစားခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကန်စွန်းရွက်၊ ဆလပ်ရွက်၊ နံနံပင်၊ ပူစီနံ စသည့် ရေချိုတွင် စိုက်အပျိုးသော အပင်များကို စားမိခြင်းကြောင့် အဓိက ရောဂါကူးစက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အသည်းရှိ ကပ်ပါးပိုးကောင်များသည် သည် အသည်းနှင့် သည်းခြေအိတ်ကို ဆက်ထားသော သည်းခြေပြွန်များထဲတွင် အနှစ် ၂၀မှ ၃၀ ခန့်အထိ ခိုအောင်းပြီး နေနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ သည်းခြေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ အမာရွတ်ဖြစ်ခြင်း နှင့် ကျယ်ခြင်းတို့ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ထိုကပ်ပါးကောင်များသည် သန်ပြားကောင်များဖြစ်ပြီး တကောင်သည် တနေ့လျှင် ဥပေါင်း ၂၀၀၀မှ ၄၀၀၀ အထိဥနိုင်ပြီး ထိုဥများကို သည်းခြေပြွန်များနှင့် လူတို့၏မစင်တွင် မှန်ဘီလူးနှင့် ကြည့်လျှင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ လူတို့၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ငါးများက စားမိပြီး ရေချိုငါးများကို လူတို့က မချက်ပြုတ်ဘဲပြန်စားမိပါကထိုသံသရာစက်ဝန်း ပြန်လည်ပတ်သွားပြီး ရောဂါပိုဆိုးစေပါသည်။
Liver Fluke Infection (အသည်းတွင် ကပ်ပါးပိုးဝင်သော ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကျောက်ကပ်ပြည်တည်ခြင်းကို ဖြစ်နိုင်ချေများစေသော အကြောင်းများစွာမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
ရောဂါဖြစ်သော ဒေသတွင်းရှိ ရေချိုငါးများကို မချက်ပြုတ်ဘဲ စားမိခြင်း
ရောဂါဖြစ်တတ်သော ဒေသများသို့ခရီးထွက်ဖူးခြင်းနှင့် ထို ဒေသတွင်းရှိ ရေချိုငါးများကို မချက်ပြုတ်ဘဲ စားမိခြင်း
အရှေ့တောင်အာရှ၊ တောင်ကိုးရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ မြောက်ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ဘက် ၊ အရှေ့ဘက် ဥရော့နှင့်ရုရှား၊ မန်ချူးရီးယား၊ ဆိုက်ဘေးရီးယားနှင့် တရုတ်ပြည် စသော ရောဂါဖြစ်သည့် နိုင်ငံများတွင် နေထိုင်သူများ
မြစ်ကမ်းပါး တလျှောက်တွင် နေထိုင်သူများ
Liver Fluke Infection (အသည်းတွင် ကပ်ပါးပိုးဝင်သော ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ထိုရောဂါဖြစ်ပွားတတ်သော ဒေသများတွင် ဝမ်းထဲတွင် သန်ဥများစစ်ဆေးခြင်း၊ အသည်း အသံလှိုင်းဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း စသည့် စစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ အသံလှိုင်းဓါတ်မှန်၊ ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်များသည် သည်းခြေပြွန်များကျယ်နေခြင်းကိုပြသနိုင်ပြီး ထိုစစ်ဆေးမှုများအရ သန်ကောင်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက သန်ချဆေးများကို တိုက်သင့်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် လူများကို ဝမ်းထဲတွင် သန်ဥများရှိမရှိ ပုံမှန် ဝမ်းစစ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
အသည်းတွင် ဖြစ်သော ကပ်ပါးသန်ကောင်များသည် သည်းခြေပြွန်များတွင် ပိတ်ဆို့နေခြင်းကြောင်း သည်းခြေရည်များစီးမထွက်နိုင်တော့ဘဲ ပြွန်များကျယ်လာခြင်း၊ ဖောင်းလာခြင်းကို ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်၊ သံလိုက်ဓါတ်မှန်နှင့် အသံလှိုင်းဓါတ်မှန်များတွင် တွေ့ရပေမည်။ ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲ ကျန်းမာနေသူများတွင် လည်း ထိုသို့ တွေ့ရနိုင်ပါသည်။
လူအများစုသည် ရောဂါဖြစ်နေသော်လည်း ရောဂါလက္ခဏာ မပြခြင်းကြောင့် သတိမထားမိကြချေ။ ထိုသို့ အသည်းတွင် ကပ်ပါးသန်ကောင်များရှိနေခြင်းကို လက္ခဏာမပြသောကြောင့် ကြာရှည်စွာ မသိဘဲနေမိပါက ကြာလာလျှင် အသည်းကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါသည်။ ရာခိုင်းနှုန်းအနည်းငယ်သော ရောဂါဖြစ်သူများတွင်သာ နုံးချိခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်းများဖြစ်တတ်ပြီး ထိုသို့ဖြစ်လျှင် အစာမကြေခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်းကြောင့် ဗိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထင်မှတ်တတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုရောဂါသည် အသည်းကို တမြေ့မြေ့ပျက်စီးစေနိုင်သောရောဂါဖြစ်သောကြောင့် စောစီးစွာသိရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။
Liver Fluke Infection (အသည်းတွင် ကပ်ပါးပိုးဝင်သော ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ထိုရောဂါအတွက် သန်ချဆးများကိုပေးရမည်ဖြစ်ပြီး အသိနောက်ကျပါက ထိုကပ်ပါးကောင်များသည် အသည်းကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့်အတွက် ခွဲစိတ်ကာ ဖယ်ထုတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကကြောင့် ရောဂါဖြစ်ကြောင်းသိသိချင်း ဖယ်ရှားနိုင်လေလေ အသည်းနှင့် သည်းခြေပြွန်များကို ထိခိုက်နိုင်ချေလျော့နည်းလေလေဖြစ်ပါသည်။
အသည်းတွင်တွယ်သော သန်ပြားကောင်များအတွက် အထိရောက်ဆုံးဆေးမှာ Triclabendazole ဖြစ်ပါသည်။
Corticosteroids ကို ရုတ်တရက် ဖြစ်လာသော ဆိုးရွားသည့် အခြေအနေများတွင် သုံးနိုင်ပါသည်။
သည်းခြေပြွန်ရောင်ခြင်း ဖြစ်လာပါက ခွဲစိတ်ကုသခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အသည်းတွင် ကပ်ပါးပိုးဝင်သော ရောဂါ
သိုး၊ ဆိတ် စသည့်အကောင်များ၏ အသည်းကို မချက်ပြုတ်ဘဲ စားခြင်း ကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
သောက်ရေနှင့် အစားအစာများ ချက်ပြုတ်ရာတွင် သုံးသော ရေများသည် သန့်ရှင်းမှုရှိပါစေ။
ကန်စွန်းရွက် စသည့် ရေတွင် ထိစပ်ပေါက်သော စားပင်များကို အစိမ်းမစားပါနှင့်။ ချက်ပြုတ်ပါ။
ရေချိုတွင် စိုက်ပျိုးသော အဆိုပါ ဟင်းရွက်များကို အစိမ်းစားလိုပါက ၆ % Acetic အက်ဆစ်ရှိသော အရည်တွင် ၅-၁၀ မိနစ်ခန့် စိမ်ပြီးမှ စားပါ။
Malignant otitis externa. http://www.healthline.com/health/malignant-otitis-
externa.Accessed 29 Feb 2017.
Malignant otitis externa. http://www.webmd.com/cold-and- flu/ear-
infection/tc/swimmers-ear- otitis-externa- topic-overview#2.Accessed 29 Feb 2017.
Malignant otitis externa. http://www.aafp.org/afp/2012/1201/p1055.html.Accessed
29 Feb 2017.